जिल्ला – Page 20 – Deshko News
Home » जिल्ला (page 20)
सप्तरी, २५ चैत । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ९ मा शनिवार राती करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अजय साहको २५ वर्षीया श्रीमती अमेरिकादेवी साहको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । आफ्नै घरमा लुगामा आइरन लगाउने क्रममा अमेरिकालाई करेन्ट लागेको थियो । मृतकको शव परीक्षणका लागि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा राखिएको छ ।
विराटनगर, २५ चैत । बालसन्त स्वामी श्रीनिवास आचार्यलाई शनिवार राती अज्ञात व्यक्तिले गोली प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएको छ । विराटनगरको जतुवामा शौच गर्न घरबाट बाहिर निस्कँदा गोली प्रहारबाट घाइते हुनुभएका आचार्यको न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उहाँलाई दाहिने तर्फको माथिल्लो भागमा गोली लागेको छ । यतिखेर आचार्य खतरामुक्त रहेको प्रहरी उपरीक्षक अरुणकुमार बिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँ विराटनगर– ...
उदयपुर आगलागी :१२ घर जल्यो, एक बेपत्ता, छ करोडको क्षति
उदयपुर जिल्लाको उदयपुरगढी गाउँपालिका– ६ स्थित नेपालटार बजारमा शनिबार राति ११ बजेदेखि भीषण आगलागी हुँदा १२ वटा घर जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ । प्रहरीका अनुसार आगलागीबाट
पूर्वी मोरङका पत्रकारलाई सुचना प्रविधि तालिम
उर्लाबारी, २३ चैत्र । पूर्वी मोरङका पत्रकारहरुलाई सूचना प्रबिधिका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सञ्चार क्लब नेपालको आयोजनामा दुई दिने सूचना प्रविधि तालिम शुक्रवारदेखि सुरु भएको छ । उर्लाबारी नगरपालिकाको सहयोगमा सुरु भएको तालिमको उद्घाटन मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सांसद कुशल लिम्बूले गर्नुभएको छ । प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका सांसद् लिम्बूले पत्रकारहरुलाई कलम र डायरी वितरण गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको हो ...
साइकलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु
मोरङ, २३ चैत । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–३ स्थित गोकुवा चोकमा शुक्रवार विहान मिनि ट्रकको ठक्करबाट एक साइकलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । उत्तरबाट दक्षिणतर्फ जाँदै गरेको को १ ख ३०७२ नम्बरको मिनि ट्रकले साइकलमा सवार सुनसरी जिल्ला, दुहबी–६ बस्ने ३५ बर्षिय सत्यनारायण ऋषिदेवलाई ठक्कर दिँदा उहाँको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो । मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा ...
मोरङमा मोटरसाईकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
मोरङ, २३ चैत । मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बिहिवार राती मोटरसाईकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको को २८ प ७४३६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई रुखमा ठोक्किदा मोटरसाईकलको पछाडी सवार सुनसरी, धरान – १७ बस्ने ३० वर्षिय संजिव विश्वकर्माको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परेर गम्भिर घाईते भएका विश्वकर्माको ...
मोरङ, २३ चैत । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–५ गिधनिया बस्ने २२ बर्षिय पुरुषोत्तम माझीको चट्याङ लागेर बिहिवार मृत्यु भएको छ । आफ्नै घरमा काम गर्ने क्रममा लागेको चट्याङले गम्भिर घाइते हुनुभएका उहाँको नोबेल अस्पताल बिराटनगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
सुनसरी, २३ चैत्र । सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिका–८ स्थित सेउती पुल नजिकैबाट प्रहरीले बिहिवार राती लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा को ९ प ७४७८ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार सुनसरी धरान उप–महानगरपालिका–३ बस्ने २६ बर्षिय संजय साह रहेका छन् । प्रहरीले उनको साथबाट कोरेक्स ५ बोतल र एस.पी ७ ट्याब्लेट बरामद गरेको छ । उनलाई वडा प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको ...
संखुवासभा, २३ चैत । गुराँसको राजधानीका रुपमा समेत परिचित संखुवासभाको धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र गुफापोखरीसम्म जाने चैनपुर—नूनढाकी —गुफापोखरी सडक निर्माण कार्यले तीव्रता लिएको छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिको अगुवाइमा नूनढाकी गुफापोखरी सडकखण्डअन्तर्गतको सडक निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । चैनपुर नगरपालिकाको रु १५ लाख बजेटबाट सो खण्डको करीब नौ किमी सडकमध्ये पाँच किमी धुले सडक निर्माण भइसकेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ...
१ नं. प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा
विराटनगर, २२ चैत । प्रदेश नं १ को सरकारले यही चैत २९ मा चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बाँकी अवधिका लागि बजेट ल्याउने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङवोले बिहिवार पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै बजेट तीन महिनाको हुने बताउनुभयो । उहाँले छोटो समयका लागि ल्याउन लागेको बजेट अनुदानमा आधारित हुने जानकारी दिनुभयो । मन्त्री आङवोले विकास निर्माणमा बजेट ...